a guy finds comfort in his books
ကြည့်စမ်းပါ .. သည်အရာတွေပျောက်ကွယ် မှေးမှိန်သွားကြပြီ
ချစ်ခင်ခဲ့ရတဲ့ မျက်နှာသွင်ပြင်တွေ ၊ စွဲလမ်းခဲ့ရတဲ့ နေရာဌာနေ တွေ
မမှတ်မိနိုင်တော့လောက်တဲ့ အခြားသွင်ပြင် ပုံဏ္ဍာန်တွေအဖြစ် ၊ အသစ်တစ်ဖန် ဖြစ်တည်မွေးဖွားလို့ … ။
(The Waste Land – T.S. Eliot)
လူတစ်ယောက် ရဲ့တွေးခေါ် ပြုမူပုံတွေဟာ သူ့လူမမယ် ဘဝရဲ့ လွှမ်းမိုးမှု ပမာဏ များစွာပါတယ် ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ လက်ခံထားကြပါတယ် ။ အမှန်ပြောရရင် အဲသည်အကြောင်းအရာဟာ စာရေးဆရာတွေ အတော်များများ အာရုံစိုက်ကြတဲ့ ကိစ္စဖြစ်နေတာကို တွေ့လာရတယ် ။ ခေတ်အဆက်ဆက် စာရေးဆရာတွေ ရေးခဲ့ကြတဲ့ ဝတ္ထုတွေရဲ့ ဇာတ်ကောင့်အပြုအမူများကို လေ့လာရရင် သည်ဇာတ်ကောင်ရဲ့ ကလေးဘဝ ခံစားချက် ၊ အတွေ့အကြုံကို အသားပေးပြီး ဇာတ်ကောင်စရိုက်ကို ပြီပြင်အောင်ဖွဲ့ လာကြတာတွေ့ ရပါတယ် ။
ဥပမာ မြန်မာ ဝတ္ထုတွေထဲက “နွမ်းလျအိမ်ပြန်” မှာ ဇာတ်ကောင် တင်မေရဲ့ သရုပ်ကိုခံစားရင် ငယ်စဉ်က နာကြင်စွာ ၊ နာကြည်းစွာ ခံစားရမှုတွေကြောင့် လူကြီးဘဝမှာ သက်ရောက်မှု ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ တွေ့ရပါတယ် ။ သည်တစ်လော ဖတ်ဖြစ်တဲ့ ကျတော်ကိုယ်တိုင် သိပ်ကြိုက်နေတဲ့ Anita Desai ရဲ့ “Clear Light of Day” မှာလည်း သည်သဘောတရားကို အသွင်တစ်မျိုးနဲ့ ခံစားရပါတယ် ။ သည်ဝတ္ထုကို ၁၉၈၀ က ပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး အဲသည်နှစ်က The Man Booker Prize Short List အဖြစ်ရွေးချယ်ခံရပါတယ် ။ ရေးသူကတော့ ဂျာမန်-ဘင်္ဂါလီ အမျိုးသမီး Anita Desai ဖြစ်ပြီး ၁၉၄၀ ကနေ ၁၉၈၀လောက်ထိ နှစ်ပေါင်း ၄၀ ဇာတ်ကြောင်းနှင့် ၊ အိန္ဒိယ-ပါကစ္စတန် နယ်မြေခွဲရေးကာလ (The partition of India) နိုင်ငံရေးနောက်ခံ ထားပြီး ရေးထားတာပါ ။ ဒါပေမယ့် စာရေးသူဟာ သီသန့် မိသားစုတစ်ခုရဲ့ အဖြစ်အပျက် အခြေအနေတွေကို နောက်ခံထားပြီး သူပြောလိုတဲ့ မိသားစုတန်ဖိုး ၊ ကလေးဘဝရဲ့ သက်ရောက်မှု ၊ ခွင့်လွှတ်နိုင်ခြင်းရဲ့ ပီတိ စတာတွေကို ခြယ်မှုန်းထားပါတယ် ။
အပေါ်က T.S. Eliot ရဲ့ ကဗျာနဲ့ စဖွင့်တဲ့ သည်ဝတ္ထုဟာ မပြောင်းလဲတဲ့ သူတစ်ယောက်ရဲ့ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေအပေါ် အံ့သြစိတ် ၊ လွမ်းဆွတ်တသတဲ့ တစ်ကိုယ်ရေ အတွေးတွေကို အခြေခံထားတာပါ ။ ဇာတ်ကြောင်းကတော့ မောင်နှမလေးယောက် ရှိတဲ့မိသားစုတစ်ခုမှာ သည်မောင်နှမလေးယောက်ရဲ့ ကလေးဘဝက မတူညီတဲ့ ခံယူမှုတွေ ၊ အစွဲအလမ်းဝါသနာတွေမှတစ်ဆင့် ကြီးပြင်းလာတဲ့ အခါ ကိုယ့်ဘဝကို ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ် သွားကြတဲ့ ဇာတ်ပါ ။ အဲသည်မှာ အဓိကဇာတ်ဆောင် Bimla ကတော့ ပညာတတ် ကျောင်းဆရာမ ၊ နောက်ဆုံးမှာ ဥာဏ်ရည်မမှီတဲ့ မောင်အငယ်ဆုံးလေးကို စောင့်ရှောက်ရင်း အိမ်မှာ ဦးစီးကျန်ရစ်တယ် ။ သည်နေရာမှာ စာရေးဆရာဟာ လူအဖွဲ့အစည်းက တစ်ကိုယ်တည်း မိန်းမတွေရဲ့ ဘဝကို အသေအချာဖွဲ့ပြတယ် ။ သူ့တို့ ငယ်ငယ်က သူတို့အိမ်မှာ ခိုင်းဖို့ခေါ်ထားတဲ့ အဒေါ်တစ်ဝမ်းကွဲ မုဆိုးမ Mira အကြောင်းကိုယှဉ်လျှက် ဖွဲ့ပြပြီး ပညာတတ် အမျိုးသမီး Bimla ရော ၊ ပညာမဲ့ Mira ပါ ( တစ်ကိုယ်ရေ ဘဝမှာ) မိသားစု တူ ၊ တူမ ၊ မောင် ညီမ တွေအပေါ် စောင့်ရှောက်ပေးဆပ်ရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဘဝနဲ့ တာဝန်ဟာ အတူတူပါပဲ ဆိုတာကို မီးမောင်းထိုးပြခဲ့တယ် ။ နောက် Bimla ရဲ့ သူတို့မိသားစု ကိုတာဝန်မယူပဲ ကျောခိုင်းသွားတဲ့ အစ်ကိုဖြစ်သူအပေါ် နာကြည်းမှု ကို ချေဖျက်ရတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို ဝတ္ထုတစ်လျှောက်လုံးရေးပြ သွားတယ် ။
နောက် ညီမဖြစ်သူ Tara ကတော့ အိမ်ထောင်ပြုပြီး မိသားစုလောင်းရိပ်အောက်က ရှောင်ပြေးမိခဲ့ သူအဖြစ် (အစ်မဖြစ်သူကို သနားရင်း) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ခွင့်မလွှတ် နိုင်သူအဖြစ် စာရေးဆရာက ရေးပြသွားတယ် ။ မိဘတွေ မရှိတဲ့နောက် စောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်လေး Mira ဆုံးတာတောင်မှ မလာနိုင်တဲ့သူ ၊ မောင်နှမ နှောင်ကြိုး ၊ မိသားစုနှောင်ကြိုးတွေကို ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ရုန်းထွက် ခဲ့မိလို့ ကြီးရင့်မှ နောင်တရသူ တစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်နဲ့ ငယ်ဘဝမှတ်ဥာဏ်ကို အရင် Bimla နဲ့မတူအောင် ( သည်ဖြစ်ရပ်ကိုကိုပဲ မတူညီတဲ့ ခံယူချက်နဲ့ ) ရေးပြသွားပါတယ် ။ နောက်ဆုံးမှာ အစ်မဖြစ်သူနဲ့ အစ်ကိုဖြစ်သူကို စေ့စပ်ပေးပြီး အပြစ်ဖြေခွင့်ရသွားသူအဖြစ် ရင့်ကျက်လာတဲ့Tara ကိုတွေ့ရတယ် ။
စာဖတ်သူအနေနဲ့ ကတော့တစ်လျှောက်လုံး နာကျင်မှု နဲ့ ကြည်နူးမှုကို တွဲယှဉ်ခံစားရတယ် ။ ဇာတ်ကောင်တစ်ယောက် ချင်းရဲ့ ခံစားမှုတွေ ကိုပြီပြင်ထင်သာအောင် စာရေးသူကရေးခြယ်ပြပြီး သူတို့တစ်တွေ ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေဟာ ကျတော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖြတ်သန်း ခဲ့ရတဲ့ ငယ်ဘဝပုံရိပ်အချို့ကို ပြန်လည်မြင်ယောင် လာမိစေပါတယ် ။ နောက်ဆုံးခန်းမှာ ဘဝရဲ့ ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်တွေကြောင့် ရင့်ကျက်လာတဲ့အခါ လူတွေအပေါ် အလိုအလျောက် သည်းခံခွင့်လွှတ်နိုင်သွားတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ တစ်ကိုယ်ရေ ပီတိကို စာဖတ်သူနေနဲ့ ပွားယူ ခံစားမိစေပါတယ် ။
( Aung Phyoe - 10.11.2010)
183 pp. [Read/Skim/Toss] [[Buy/Borrow]
Posted by Aung Phyoe at 04:27 1 comment: